Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Lix Dublomaasi oo Kamid Ahaa Gumaysiga Itoobiya oo Goostay.
Deg Deg: Lix Dublomaasi oo Kamid Ahaa Gumaysiga Itoobiya oo Goostay.
Posted by ONA Admin	/ August 4, 2016
Warar goor dhawayd soo gaadhay ONA ayaa sheegayaan inay goosteen lix dumlamasiyiin sar sare ahaa oo u shaqaynayay xukuumada Gumaysiga Itoobiya. Duplomaasiyiintan ayaa waxay ka kala shaqayn jireen hay’ado kala duwan oo caalamka kamidah ayaa ka goostay xukuumada taagta daran ee gabalkeedu sii dhacayo ee wayaanaha. Dublomasiyiintan ayaan wadanka dib ugu soo laabanin kadib markuu dhamaaday hawlohoodii dublamaasinimo.
Wasiirka Arimaha Dibbada ee Gumaysiga Itoobiya ayaa wuxuu ku guul daraystay inuu wax warbixin ah ka keeno dublomasiyiintan madaamada ay dhamaysteen shaqadoodii dublamaasinimo ee ay ku joogeen dalalka dibada ilaa iyo haatana ma aysan dib ugu soo laabanin wadanka. Masuuliintan ayaa waxay ka kala shaqayn jireen wadamada Ghana, Maraykanka, South Africa iyo India.
Elias worku iyo Getachew Mulualim oo ahaa qunsulkii Safaarada Gumaysiga Itoobiya iyo shaqaale hosaadkii safaarada gumaysiga ee wadanka South-Africa ayaa ayagana la sheegayaa inay ka baxsadeen nidaamka guracan ee gumaysiga Itoobiya, sido kale Eshete Misgana oo asna ahaa Lataliyaha Safiirka Gumaysiga ee Ghana ayaan isna wax faah faahina ah laga haynin wax warbixin ah na uunsan ka keenin wasiir ku sheega Arimaha Dibada ee Gumaysiga. Henock Asnake oo ahaa lataliyaha safaarada gumaysiga Itoobiya ee Dalka India ayaa isna baxsaday.
Baxsadka siyaasiyiinta sar sare ayaa waxay si caadi ah ka noqdeen xukuumada gumaysiga Itoobiya, waxaana mudooyinkii ugu dambeeyay soo badanayay siyaasiyiinta gumaysiga Itoobiya oo baxsigoodu maalinba maalinta ka danbaysa kor u sii kacayay. Shucuubta ku hoos dulman Gumaysiga Itoobiya ayaa waxay isu diyaarinayaan inay todobaadka soo socda afka-ciida u daraan taliska guracan ee Gumaysiga Itoobiya.